शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा छैठौं कलेजो प्रत्यारोपण
चैत्र २२, २०७७ ०९:२० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालमा १२ औं कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ । शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा चैत २१ गते हिजो छैठौं कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ । भक्तपुरका ४४ वर्षका पुरुषको कलेजो प्रत्यारोपण भएको केन्द्रका निर्देशक डा.प्रेमराज ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
‘बाबुलाई जण्डिस भएको रहेछ, पछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उहाँको कलेजोले काम नगर्ने भएछ । डा.ज्ञवालीले भन्नुभयो,‘उहाँकी २६ वर्षकी छोरीले कलेजो दिनुभएको हो अहिले दुबैको अवस्था सुधारोन्मुख छ । ’
प्रत्यारोपणमा केन्द्रका कलेजो टिमका डा. छेतेन योञ्जन, डा. अनिसा तिवारी, डा.ललित दास, एनेष्थेरियामा डा. आरती राई, डा.शुसिल तामाङ तथा नर्सहरु बिनिता उप्रेती र अनिता सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
प्राविधिक सहयोगका लागि भारतबाट डा.शलिन अग्रवालको नेतृत्वमा ५ जनाको टिम आउनु भएको थियो । अहिलेसम्म नेपालमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ५, प्रत्यारोपण केन्द्रमा ६ र उपत्यका बाहिर चितवन मेडिकल कलेजमा १ जनाको कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ ।
२०७३ साल मंसिर १२ गते मिर्गाैला तथा कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सोही केन्द्रमा नेपालमा पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो । उहाँको नेतृत्वमा उक्त केन्द्रमा ५ वटा कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो ।
१३ औं कलेजो प्रत्यारोपण